Isisombululo seGesi yamafutha
I-ACTION izinikele ekuboneleleni ngesisombululo esithembekileyo senkqubo yokhuseleko lwegesi yegesi edolophini, esetyenziswa kakhulu kwizixhobo zegesi ezisebenza ngokubeka iliso (i-compressors, i-dryers kunye neepaneli zokulawula ulandelelwano) kunye neenkqubo zokuhlola ukhuseleko (iinkqubo zokubeka iliso zokhuseleko lwezitishi ze-CNG, ukuvuza kwegesi yamafutha. ukubeka iliso, iinkqubo zokothusa umlilo kunye nokubeka iliso kwividiyo).Inkqubo ayikwazi nje ukubeka iliso kunye nokulawula ukhuseleko kunye nokusebenza okuzenzekelayo kwesikhululo segesi kodwa ixhasa ukuhanjiswa kwedatha ngeB / S kunye neC / S isakhiwo.Iyakwazi ukude esweni imveliso yesikhululo segesi yonke kunye nokusebenza kwinkampani-level yokuhambisa iseva.Isisombululo kunye neemveliso zisetyenziswe ngempumelelo kwaba bathengi balandelayo:
China Urban Fuel Gas, China Resources Gas, Towngas, ENN, Kunlun Gas, Xinjiang Gas, PetroChina Sichuan Sale Branch, SINOPEC Sichuan Sale Branch, PetroChina Urumchi Sale Branch, SINOPEC Zhejiang Sale Branch, Datong Coal Mine Group, CR Real Estate, Vanke Real I-Estate, i-BRC, iZhonghai International, i-Longfor Real Estate, i-Hutchison Whampoa kunye ne-Capital Land.
▶ Isixokelelwano sothungelwano sothungelwano lwe-alam yerhasi yerhasi inokubona ulawulo olukwindawo esembindini ekrelekrele ngaphezulu kweemeko zerhasi kwindawo ekufikelelwa kuyo (abahlali bommandla) kunye nokungaphazanyiswa kweeyure ezingama-24 zoluhlu olugcweleyo lokuhlola unyaka wonke.
▶ I-alam yendlu ye-ACTION inokudlulisela idatha kwi-DRM (isixhobo sokujonga iqonga esikude) ngemo yonxibelelwano ye-GPRS.Ngaloo ndlela ukhuseleko lwegesi yasekhaya luphantsi kweliso lobuchwephesha iiyure ezingama-24 ngosuku.
▶ Njengoko kuvela iinkcukacha ze-alam, isixokelelwano se-alam yegesi yasekhaya siya kukhawulezisa ngokuzenzekelayo kwaye simise i-alam ngokuchanekileyo nangokukhawuleza ukuze abantu abanxulumene ne-alam bayibambe kwangexesha.
▶ Njengoko isixhobo sokubona kwisixokelelwano se-alam yerhasi yasekhaya sibona ingozi ekwisiza, sinokunika i-alam ngeqonga lolawulo lwenkqubo kwaye sinikeze umyalezo omfutshane ukukhumbuza abantu abanxulumeneyo ukuba baphelise ingozi.
▶ Abasebenzisi banokukhuphela ii-APP ukuze basebenzise iitheminali eziphathwayo ukujonga iimeko zokusebenza kwezixhobo.
▶ Inkqubo inexabiso eliphantsi lokusetyenziswa kwaye inokufakwa ngokulula.
IAlam yerhasi etshayo, Isikhangeli segesi se-lpg, China Gas Detector, isixhobo segesi, umtshini wegesi onokutsha, umtshini wegesi osisigxina,